တရုတ် DL- 1-8 Rolls စူပါနူးညံ့သောမျက်နှာသုတ်ပုဝါပြန်ရစ်စက် Dele
၁။ အလုပ်လုပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်-လိပ်များကိုတိုက်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း-ခေါက်ခြင်း၊ ဖောက်ခြင်း-ပြန်ရစ်ခြင်း-မီတာအလိုက် ing ရေတွက်ခြင်း-ထုတ်ကုန်များချောမွေ့ခြင်း
3. ထိရောက်သောအကျယ်: ၁၄၀၀ မီလီမီတာ၊ အချင်းအများဆုံး ၁၀၀၀ မီလီမီတာ
5. ပါဝါ: 5.5 kW
၆။ ကိရိယာများကို pneumatic automatic နို့တိုက်ကျွေးရေးကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ သံလိုက်အမှုန့်လိပ်နှင့်မူလအထည်၊ စွမ်းရည်: ၁၀-၉၀ မီတာ / မိနစ်
a ဖြတ်တောက်ခြင်းဓားသည်စံသံမဏိကိုသုံးသောစက်ဝိုင်းဓါး ၁၀-၁၅ လုံးကိုသုံးသည်။
ခ ရေတွက်စက်သည်တရုတ်-ကိုရီးယားဖက်စပ် "XinJie" အမှတ်တံဆိပ်၏အီလက်ထရောနစ်ကောင်တာကိုလက်ခံသည်။
ဂ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူစက်မှုအနိမ့်မြန်နှုန်း (သို့) မြန်နှုန်းမြင့် stepless speed
T/T 40% ငွေသွင်းခြင်း၊ သင်္ဘောမထွက်မီ 60%
ယခင်: DL- 1-5 Rolls super soft towel rewinding machine
နောက်တစ်ခု: DL-F1200 Perforating Slitting Rewinding စက်